Meizu M5၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့်အမြင် Androidsis
Alfonso က de Frutos | | Meizu, reviews
တူထုတ်လုပ်သူရှိပါတယ် Meizu ဖြိုဖျက်စျေးနှုန်းများဖြင့်အလွန်ပြည့်စုံသောတယ်လီဖုန်းများကိုတင်ပြခြင်းဖြင့်တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်မှုကဲ့သို့ပြည့်နှက်နေသောစျေးကွက်တွင်ခြေကုပ်ယူရန်စီမံခန့်ခွဲခြင်းဖြစ်သည်။
ငါတို့ကဲ့သို့သောသူတို့၏ဖြေရှင်းချက်အချို့ကိုစမ်းသပ်ပြီးဖြစ်သည် Meizu M3 မှတ်စုယခုမူကားအလှည့်ဖြစ်၏ Meizu M5, သင်ရှာနိုင်သည်တစ်ခု entry ကိုအကွာအဝေး အမေဇုံအပေါ် 150 ယူရိုသည်။
2 Meizu M5 ၏နည်းပညာဆိုင်ရာလက္ခဏာများ
4 Meizu M5 နှင့်ရိုက်ထားသောဓာတ်ပုံပြခန်း
ဒီဇိုင်းအကြောင်းမပြောခင်ငါရှင်းရှင်းလင်းလင်းတစ်ခုပြောချင်တယ်။ Meizu M5 သည် iPhone 5c နှင့်အလွန်ဆင်တူသည်။ ဒါမကောင်းဘူးလား Apple ရဲ့ဖြေရှင်းနည်းကိုရှာမယ့်သူတွေအတွက်အဲဒါကိုကောင်းကျိုးတစ်ခုအဖြစ်တောင်ကျွန်တော်မမြင်ပါဘူး။
တရုတ်ထုတ်လုပ်သူကရွေးချယ်သည် ရှေ့ဖက်အတွက်ဂန္ထဝင်ဒီဇိုင်း၊ လက်ဗွေအာရုံခံကိရိယာထားရှိသည့်ဖန်သားပြင်အောက်ရှိခလုတ်တစ်ခုနှင့်အမူအယာကို အသုံးပြု၍ အင်တာဖေ့စ်ကိုလမ်းညွှန်ရန်လည်းကူညီသည်။
ပစ္စည်းတွေအရ M5 မှာအကာအကွယ်ဖန်သားမရှိပေမယ့်အနည်းဆုံးငါအတည်ပြုနိုင်ပါတယ် 2.5D အနား rounded ဖုန်းကိုမငြင်းနိုင်သောအယူခံဝင်ရန်နှင့်ထိတွေ့မှုတိုးတက်စေရန်။
ဖုန်းပြောပါ အတော်လေးအဆင်ပြေလွယ်ကူပါတယ်၅.၂ လက်မမျက်နှာပြင်တပ်ဆင်ရန်၎င်းသည်အတော်လေးစီမံခန့်ခွဲနိုင်သည့် terminal ဖြစ်ပြီး၎င်း၏ ၁၃၈ ဂရမ်အလေးချိန်သည် Meizu M5.2 ကိုကောင်းစွာကိုင်တွယ်နိုင်သည်။
ဘေးထွက်ခလုတ်များသည်ခရီးသွားခြင်းကိုကောင်းမွန်စေသည်။ ရှေ့အစိတ်အပိုင်းကို entry-level range တစ်ခုအဖြစ်ကောင်းစွာအသုံးပြုထားပြီးယူရို ၁၅၀ မရောက်သောဖုန်းသည်မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းယေဘူယျအားဖြင့်လိုက်ဖက်သည်။
Meizu M5 ၏နည်းပညာဆိုင်ရာလက္ခဏာများ
operating system စိတ်ကြိုက် Flyme အသုံးပြုသူမျက်နှာပြင်အောက်ရှိ Android 6.0
ဖန်သားပြင် ၅.၂ လက်မ IPS HD စနစ်ဖြင့်ပြသထားသည်
Processor ကို MediaTek MT6750
GPU ကို ARM မာလီ T860
ရမ် 2GB RAM
ပြည်တွင်းသိမ်းဆည်းခြင်း 16 GB မှတ်ဉာဏ်ကဒ်အထိုင်မှတဆင့်ချဲ့ထွင်
နောက်ကင်မရာ LED Flash နှင့်အတူ 13 mpx အာရုံခံကိရိယာ
ရှေ့ကင်မရာ5Mpx အာရုံခံကိရိယာ
ဆက်သွယ်မှု နောက်မျိုးဆက် ၄ မျိုးဆက် LTE - မြန်နှုန်းမြင့်ကြိုးမဲ့လွှမ်းခြုံမှုအတွက်4×2Wi-Fi MIMO (အင်တင်နာ ၂ ခု) - Bluetooth - GPS နှင့် aGPS - OTG - Micro USB port
ဘက်ထရီ 3070 mAh ဘက်ထရီ
ရှုထောင့် 147.2 x ကို 72.8 x ကို 8 မီလီမီတာ
အလေးချိန် 138 ဂရမ်
စြေး အမေဇုံအပေါ် 150 ယူရို
နည်းပညာပိုင်းအရကျွန်ုပ်တို့သည် entry-level တယ်လီဖုန်းနှင့်ရင်ဆိုင်နေရသည်။ မရှိတော့ပါ။ သင့်ရဲ့ configuration ကိုကျွန်တော်တို့ကို ကြီးမားသောအရင်းအမြစ်များမလိုအပ်သောရွေ့လျားဂိမ်းများသို့မဟုတ် application များကိုခွင့်ပြုလိမ့်မည် အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်မျှတသောနောက်ဆုံးပေါ်ဂိမ်းကိုတပ်ဆင်ထားပါကဖုန်းသည်၎င်းကိုရွေ့လျားနိုင်မည်ဖြစ်သော်လည်းချောမွေ့စွာလုပ်ဆောင်နိုင်လိမ့်မည်။ အင်တာနက်၊ လူမှုရေးကွန်ရက်များကို အသုံးပြု၍ စမတ်ဖုန်းကိုအသုံးပြုလိုသူမည်သူမဆို၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန်ဒီ terminal သည်အပြည့်အဝအသုံးချမည်ဖြစ်ကြောင်းသတိရပါ။
၎င်း၏အစွမ်းထက်မီးမောင်းထိုးပြ 3.070 mAh ဘက်ထရီ။ ဤ terminal ကိုကျွန်ုပ်စမ်းသပ်ခဲ့စဉ်ကလုပ်ခဲ့သောစမ်းသပ်မှုများတွင်ဤအပိုင်းသည် Meizu M5 ၏စိတ်ဝင်စားဖွယ်အကောင်းဆုံးဖြစ်ကြောင်းသံသယမရှိဘဲအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပြီ။
ငါဖုန်းကိုအလွန်အမင်းအတော်အသင့်အသုံးပြုပြီး ၂ ရက်ကြာသည်အထိကြာမြင့်ခဲ့ပြီး M5 ထဲမှအများဆုံးကိုညှစ်ယူရန်လိုအပ်သည့်အချိန်များတွင်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည့်အတွက်ကျွန်ုပ်သည်တစ်နေ့နှင့်တစ်နှစ်ခွဲပြproblemsနာမရှိဘဲရောက်ရှိခဲ့သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ လျင်မြန်စွာအားသွင်းတဲ့လက္ခဏာမပြနိုင်ပေမယ့်ကောင်းမွန်တဲ့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရှိသော်လည်းဒီရှုထောင့်ကိုစိုးရိမ်စရာမလိုပါဘူး။
Meizu သည်၎င်း၏ M5 အသစ်တွင်စျေးနှုန်းအလွန်မြင့်တက်ခြင်းကိုမလိုချင်ခဲ့ပါ၊ ထို့ကြောင့်အချို့သောအပိုင်းများ၌ကတ်ကြေးများကိုထုတ်ယူရန်အချိန်ကောင်းဖြစ်ပြီး၎င်းတို့ထဲမှတစ်ခုသည်မျက်နှာပြင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒီအဘို့သူတို့တစ်တွေရွေးချယ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပြီ solvent panel သည်အရည်အသွေးကောင်းမွန်ပြီးအသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကောင်းများရရှိစေပြီးစျေးနှုန်းများမြင့်တက်လာခြင်းကိုတားဆီးသည်.
ဒီအဘို့, ထုတ်လုပ်သူ panel ကိုရွေးချယ်ခဲ့သည် ၅.၂ လက်မ IPS နှင့် HD5.2p resolution တို့တစ်လက်မလျှင် ၂၈၂ pixel ရှိပြီးအရည်အသွေးကောင်းမွန်သောလူဖြူများရှိသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်အရောင်များသည်အလွန်သဘာဝကျပါသည်၊ သို့သော်လူမည်းများသည်နက်ရှိုင်းလွန်းခြင်းမရှိသကဲ့သို့အထူးသဖြင့်နေသာသောနေ့၌အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံအနည်းငယ်ကိုအလေးထားသည်။
ဒီ Meizu M5 လှုပ်ရှားနေတဲ့စျေးနှုန်းအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ပေးတဲ့သူ့ရဲ့လက်ဗွေ sensor ကိုမမေ့နိုင်ပါဘူး။ လက်ဗွေကိုများသောအားဖြင့်အလျင်အမြန်သိရှိနိုင်သည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏လက်ချောင်းကိုအကြိမ်များစွာတင်ခဲ့ရသော်လည်း၊ Android စကြ ၀ inာတွင်စတင်ရန်ဖုန်းတစ်လုံး။
ဟုတ်ပါတယ်, သူ့ရဲ့ interface ကိုငါလုံးဝမှာမကြိုက်ဘူး။ ထို့အပြင် Flyme OS သည် Android မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံနှင့်နီးစပ်မှုမရှိပါ။ အိုကေ၊ ကျွန်ုပ်ကြိုက်နှစ်သက်သော capacitive ခလုတ်များအစား fingerprint sensor ကိုအသုံးပြုရန်စိတ်ကူးသည်၊ သို့သော်အာရှထုတ်လုပ်သူ၏ထုံးစံအလွှာသည်ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုနေသောအရာနှင့်အလွန်ဝေးနေခြင်းသည်ကျွန်ုပ်နှစ်သက်သောဘာသာရပ်ဖြစ်သည်။ ဘာကြောင့် iPhone နဲ့တူနေတာလဲ။
Flyme မှာကောင်းတဲ့အရာတွေရှိလား။ သိသာထင်ရှားသည်မှာဟုတ်ပါသည်။ သင်ဤအရာနှင့်အကျွမ်းတ ၀ င်ရှိပါက၎င်းသည်အလွန်စိတ် ၀ င်စားဖွယ်ကောင်းသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များပါသောမျှတသောပြည့်စုံသောစနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့် Android terminal နဲ့မတူပါဘူး ရိုးရှင်းပါတယ်
နောက်ဆုံးတော့ငါအကြောင်းပြောသွားမယ် Meizu M5 ကင်မရာများ။ အစပြုရန် terminal တွင်နောက်ကင်မရာ 5-megapixel အပြင်ရှေ့ကင်မရာသည် 13-megapixel ရှိသည်။
အဲဒါကိုမီးမောင်းထိုးပြပါ Meizu M5 ၏ကင်မရာမျက်နှာပြင်တွင်ရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်။ ကျွန်တော်တို့အနေဖြင့်အဖြူချိန်ခွင်လျှာသို့မဟုတ်အတိမ်အနက်ကဲ့သို့သောမတူညီသော terminal parameters များကိုကိုယ်တိုင် configure ပြုလုပ်ရန်ခွင့်ပြုထားသည့်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော professional mode အပါအ ၀ င်။
ဖုန်းကလုပ်တယ် လျောက်ပတ်သောဓာတ်ပုံများ, ဒါပေမယ့်အများကြီး fanfare မပါဘဲ။ အလင်းရောင်ကောင်းမွန်သောပတ်ဝန်းကျင်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကြီးမားသောအရည်အသွေးကိုမျှော်လင့်မထားသော်လည်းအလင်းရောင်နှင့်ကြည်လင်ပြတ်သားသောအရောင်များဖြင့်လက်ခံနိုင်ဖွယ်ကောင်းသောရိုက်ချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ယူနိုင်သည်။
ညဥ့်နက်သောအခါသို့မဟုတ်ကင်မရာကိုအိမ်တွင်း၌အသုံးပြုပါကကြောက်လန့်နေသောဆူညံသံပေါ်လာသည်ကိုသင်ချက်ချင်းတွေ့လိမ့်မည် နှင့် Captruas ၏အရည်အသွေးသိသိသာသာကျဆင်းသွားသောကြောင့် Meizu M5 ကင်မရာသည်၎င်းနှင့်အလွန်ဝေးကွာသောအချက်မဟုတ်ကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိမြင်စေသည်။ ဟုတ်ပါတယ်, သင်ကတစ် ဦး ထက်ပိုမြန်ထဲကရလိမ့်မယ်။
Meizu M5 နှင့်ရိုက်ထားသောဓာတ်ပုံပြခန်း
ကျွန်ုပ်တို့သည်စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသည့်အရာများ၊ အထူးသဖြင့်အချို့သော ၀ င်ရောက်ဖုန်းများနှင့်ရင်ဆိုင်နေရသည် အလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောဒီဇိုင်း, una အဆုံးမဲ့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် နှင့် sလက်ဗွေအာရုံခံကိရိယာ, entry ကိုအကွာအဝေးအတွင်းရှာရန်ခက်ခဲတစ်ခုခု။
ကင်မရာဟာစျေးကွက်ထဲမှာအကောင်းဆုံးမဟုတ်ပေမယ့်သင့်ကိုပြtroubleနာများစွာကနေလွတ်မြောက်စေနိုင်ပါတယ်။ ငါ့အစစ်ပေမယ့်? Flyme, Android နှင့်အလွန်ကွဲပြားခြားနားသောစိတ်ကြိုက် ဂူးဂဲလ် operating system ကိုအသုံးမပြုတဲ့ terminal ကိုကျွန်ုပ်တို့ရင်ဆိုင်နေရပုံရသည်။
Flyme သည် Android နှင့်အလွန်ဝေးကွာသည်
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Meizu » Meizu M5၊ သုံးသပ်မှုနှင့်အမြင်
အသစ် Huawei Nova2နှင့် Nova2Plus တို့ပါ
OnePlus5ကိုလွှဲပြောင်းခြင်းအစီအစဉ်ကိုစတင်သည်။ ထို့ကြောင့်သင် OnePlus XNUMX ကိုသင်ဝယ်သောအခါသင်သိမ်းဆည်းနိုင်သည်